Vaovao Geoengineering - AutoDesk, Bentley ary Esri - Geofumadas
Inona no Vaovao ao amin'ny Geo-engineering - AutoDesk, Bentley ary Esri
Jiona, 2019 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Microstation-Bentley
AUTODESK dia manambara ny famerenana, ny famandrihana ary ny fiankinan-doha 3D
Autodesk dia nanambara ny famoahana ny Revit, InfraWorks ary ny Civil 3D 2020.
Miaraka amin'ny Revit 2020, ireo mpampiasa dia afaka mamorona antontan-taratasy mazava sy antsipirihany izay maneho tsara kokoa ny tanjon'ny famolavolana, mampifandray ny angon-drakitra ary mamela ny fiaraha-miasa sy ny fanomezana ny tetikasa amin'ny fitetezana bebe kokoa. Hanampy amin'ny fampihenana ny fotoana natokana amin'ny asa fahatsiarovan-tena izany ary hampiroborobo ny asa mahomby.
Ny Civil 3D 2020 koa dia manatsara ny fahaiza-manao sy ny fampitomboana, manatsara ny famolavolana sy ny famokarana BIM, indrindra ho an'ny tetikasa lehibe sy sarotra. Ny andiany farany indrindra dia misy karazany vaovao toy ny: Dynamo for Civil 3D, izay hamafisina ireo asa miverimberina ary manampy ny mpampiasa hahazo bebe kokoa ny modely.
Miaraka amin'i InfraWorks 2020, Autodesk dia manohy ny fanoloran-tenany amin'ny fampidirana ny BIM sy GIS. Ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Esri dia namela azy hanararaotra ireo tahiry GIS goavana azo omena ampahibemaso na voatahiry anatiny, miaraka amin'ny fomba tsotra izay manakana ny ankamaroan'ny fiovàna izay tsy maintsy nitranga. Io famoahana io dia manampy ny fahafahana mamaham-peo ny rakitra InfraWorks novokarina tao amin'ny magazay Esri data.
Nividy indoo.rs i Esri ary nanambara ny fanombohana by ArcGIS Indoors
Ny 28 February 2019, Esri, mpitarika iraisam-pirenena momba ny toerana misy ny tsiambaratelo, dia nanambara ny fahazoana ny indoor GmbH, mpamokatra lehibe indrindra amin'ny rafitra fananganana toeram-panorenana (IPS) ao an-tokantrano.
Ny rindrambaiko indoo.rs dia ho tonga ao amin'ny ArcGIS Indoors of Esri, famokarana vaovao izay ahafahana mamorona aterineto any amin'ny orinasa, trano fivarotana, toerana ara-barotra, seranam-piaramanidina ary bebe kokoa. Ankoatra izany, ny famerenana dia hanome ny mpampiasa ny sehatra ArcGIS Esri miaraka amin'ny serivisy toeram-piasana IPS mba hanohanana ny fandraketana sy ny fanadihadiana anatiny. Ny foiben'ny indoo.rs dia ho toy ny foibe Esri R & D vaovao any Vienne, Aotrisy, izay mifantoka amin'ny fahaiza-manaon'ny IPS.
"Indoo.rs dia mpitarika Mpanome ny rindrambaiko sy ny IPS asa, niara-niasa tamin'ny fikambanana manerana izao tontolo izao toy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, lalamby toby sy ny orinasa lehibe foibe, ary Faly aho handray ny orinasa ho an'ny Esri fianakaviana", hoy i Brian Cross, talen'ny asa fanompoana matihanina any Esri. «Ny teknôlôjia, ny traikefa sy ny fitarihana indoo.rs amin'ny sehatra IPS dia ho tombontsoa lehibe ho an'ny mpanjifa izay maniry hitondra ny herin'ny SIG mankany amin'ny toerana anatiny».
"Ho lasa ampahany manan-danja amin'ny portfolio-n'i Esri dia ahafahantsika manohy manome ny tolotra ataontsika amin'ny avo indrindra amin'ny sehatra matihanina", hoy Bernd Gruber, mpiara-manorina indoo.rs. "
"Efa hitantsika fa ny IPS tsena no nipoaka tao anatin'ny taona vitsivitsy," hoy Rainer Wolfsberger, Tale Jeneralin'ny indoo.rs, "ary ny orinasa mpanjifa naneho be liana tamin'ny fidirany lalina amin'ny IPS ny teknolojia, ary dia toy izany no afaka soa amin'ity vahaolana ity amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny fikambanana ».
Ny Bentley Systems dia mamatsy vola ao amin'ny Digital Water Works ho an'ny vahaolana ho an'ny fotodrafitrasa fako
Ny Bentley Systems dia nanambara ny fampiasam-bola ara-bola ao amin'ny Digital Water Works, vahaolana iraisam-pirenena sy ivon'ny dizitaly dizitaly, noho ny rafitra ara-pahalalàna ara-pahasalamana.
Ity fiaraha-miasa ity dia hanampy ireo orinasa hanitatra ny fitarihana azy ireo, ka hitondra vahaolana tsara kokoa amin'ny kambana dizitaly ampiharina amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny orinasa na mpampiasa vola midadasika ao amin'ny tontolon'ny fako maneran-tany.
Ny Water Water Works dia fantatra amin'ny fanampiana ireo rano sy toeram-pampanaram-pidiovana manamboatra sehatra fifanakalozan-javamaniry maimaim-poana sy azo antoka ary azo antoka. Eo ambany ny fifanarahana, ny orinasa dia mikendry ny hampihatra ny fampidirana fampiharana manodidina ara-barotra rindrankajy (fandriana azo ahorona), araka ny Openflows sy iTwin manolotra Systems Bentley. Bentley Systems dia hanome fahazoan-dalana mivantana amin'ny mpanjifa Digital Water Works. Hanan-jo hanendry mpitantana roa ihany koa ianao izay handray anjara amin'ny Filankevitry ny Trano Famokarana Dihy.
Nilaza toy izao i Paul F. Boulos, mpamorona sy mpikarakara ny Digital Water Works tamin'izany fotoana izany: "Faly izahay ary omem-boninahitra ny handray an'io fampiasam-bola be Bentley io. Ny tariny dia ny foto-drafitrasa niomerika kambana vokatra dia ho ampiharina amin'ny dingana nandritra ny dimy ka hatramin'ny folo volana, ary ny volana dia hanomboka ny fandaharam-potoana tany am-boalohany fananganan-jaza ho an'ny Asa vaventy ny rano sy wastewater injeniera orinasa izay te-hanampy amin'ny drafitra ny famolavolana ny vokatra ary avy eo manao testamenta beta momba ny rindrambaiko «.
Greg Bentley, Tale Jeneralin'ny Bentley Systems nizara: "Ny fampiasam-bola ny Bentley Systems in Digital Water Asa, dia midika hoe ny fankasitrahana izay specializes amin'ny dizitaly fampidirana singa tena ilaina, dia hilalao anjara toerana mba hanampiana ny foto-drafitrasa tompony mba hahabetsaka ny mety ny dizitaly dizitaly.
Noho ny lalana mankany amin'ny fandrosoana nomerika ho an'ny Asa vaventy fantson-drano ny foto-drafitrasa eto amin'izao tontolo izao, na iza na iza tsy ho vokatra kokoa noho ny Dr. Paul Boulos amin'ny fitarihana injeniera sy ny injeniera orinasa, amin'ny alalan'ny rano Digital Asa mba hahatakatra ny fahafahana tsy voafetra ireo zandriny roa vao misokatra ankehitriny. "
Nalaina tao Gazety Geo-engineering -Junio ​​2019
Previous Post«Previous Vaovao ara-teknolojia ao amin'ny Geo-engineering - Jona 2019
Next Post Tantara - FME World Tour Barcelonamanaraka »